फुटको संघारमा पुग्यो एमाले! अोलि बिरुद्ध गोतम, नेपाल र खनालको बनायो यस्तो समिकरण! – Newsharpal24
फुटको संघारमा पुग्यो एमाले! अोलि बिरुद्ध गोतम, नेपाल र खनालको बनायो यस्तो समिकरण!
March 14, 2021 adminLeaveaComment on फुटको संघारमा पुग्यो एमाले! अोलि बिरुद्ध गोतम, नेपाल र खनालको बनायो यस्तो समिकरण!
आज ओलीले अध्यक्षका हैसियतले विधानको बाधा अड्काउ फुकाएर अध्यक्ष र महासचिवबाहेक सबै पदाधिकारी खारेज गरेका छन् । उनले स्थायी कमिटी पनि खारेज गरी महाधिवेशन आयोजक कमिटि गठन गरेका छन् ।प्रदेश इञ्चार्जहरु पनि फेरबदल गरी पूर्व माओवादी केन्द्रबाट आएकाहरुलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका छन् ।
ओलीको यो कदमसँगै माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता रहेनन् ।उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको पद पनि गएको छ । अब नेपाल, खनाल र गौतमले गम्भीर कदम चाल्न सक्ने बुझिएको छ । उनीहरु एमालेबाट अब ओलीलाई निस्काशनको निर्णयमा पुग्ने गरी कदम चाल्ने तयारीमा छन् ।ओलीको कठोर कदमसँगै नेपाल समूहले आकस्मिक बैठक डाकेर रणनीति बनाउँदैछ ।
एमालेमै रहेर संघर्ष गर्ने भनी निर्णय गरेको नेपाल समूहले ओलीको कदमको विरोध गरिसकेको छ ।
यसलाई विधान विपरित भनेपनि ओलीले भने माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई एमालेबाट निस्काशन जस्तैको अवस्थामा पुर्याएका छन् ।
सल्यानमा अपत्यारिलो घट्ना।अाफ्नै भाईको ८ महिनाको गर्भ रहेको खुलासा!
प्रधानमन्त्री ओलीले चाले यस्तो कडा कदम! प्रदेश सभा पनि विघटन गर्ने पक्षमा